Sina mafana maivana haingam-pandeha haingam-pandeha haingo mahery USB adapter 65W fanamboarana sy orinasa | Staba Electric
*Wall Multi Usb Charge 65W Details antsipirihany
Mivoatra ny haitao amin'ny indostria rehetra manomboka amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara ka hatramin'ny fifandraisana ary ankehitriny hatramin'ny fomba ahoana no andoavana ny solosaina finday, ny takelaka ary ny telefaona. Tsy mila mitondra charger hafa intsony ianao, noho ny mpamily GaN USB C PD.
Ity karazana ity dia manana famoahana herinaratra tanteraka voafetra amin'ny 65W izay miantoka ny solosainao finday ao anatin'ny roa ora. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny solosaina finday misy naoty ambany na mihoatra ny 65W. Tonga miaraka amin'ny seranan-tsambo USB, ahafahanao mameno ny fitaovana miaraka aminao. Ny famatsiana herinaratra manan-tsaina dia manome antoka fa ny fitaovana rehetra dia voampanga tsara. Izy io dia mifanaraka amin'ny MacBook, telefaona, takelaka, ary fitaovana USB hafa. Powered by GaN tech, ity charger ity dia 30% kely kokoa noho ny charger hafa, matevina be miaraka aminao na aiza na aiza alehanao. Ity charger 65W PD compact ity miaraka amin'ny fandefasana herinaratra USB dia midika famoahana haingana ho an'ireo fitaovana ampiasain'ny USB-PD.
Ny endrika kely indrindra sy kely dia mety tafiditra ao am-paosinao amin'izay hitondranao azy na aiza na aiza alehanao. Ny fahazavany koa dia manala ny androm-piainany. (Mifanaraka amin'ny famandrihana PD & QC). Premium sy Portable - Nosedraina ireo seranana mba mahazaka fampiasana mihoatra ny 10.000 ary novolavolaina ny charger mba hahazoaana ny famandrihana hatrany mandritra ny 10,000 ora farafahakeliny, hanome anao kalitao azonao ianteherana. Pd GaN USB charger miaraka amin'ny fanaparitahana herinaratra manan-tsaina, manatsara ny fahombiazan'ny asa na fitaovana tokana na maromaro. Izy io dia natao hiara-miasa amin'ny solosaina sy ny fitaovana marani-tsaina farany mamela ny orient orient plug ary ny famerana haingana kokoa. fanampiny betsaka. Miaraka amin'izany dia hahazo fiasa mangatsiaka kokoa ianao ary famahanana avo lenta.
Fiampangana haingana ny fiarovana haingana Pd
Compatible malefaka C Pd Charger mifanentana
Fandefasana herinaratra manan-tsaina Wall Multi Usb Charge
Mizara am-pahendrena 65W ny herinaratra eo anelanelan'ny fitaovana 2 rehefa mamaly miaraka sy manohana haingana hatramin'ny 65W rehefa misy fitaovana tokana mifandraika, dia arofanina rindrina marani-tsaina
Previous: Travel be herinaratra malaza 65W karazana c pd usb charger PD65W
Manaraka: USB manara-penitra haingam-pandeha haingana rindrambaiko USB charger PD30W